မောရှေသည် မဟုတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိုခြင်းကို တားမြစ်၍ သခင်ယေရှု ကမူ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ကျိန်ဆိုခြင်းကို တားမြစ်သည်။
အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများနည်းတူ ယုဒလူမျိုးများသည် ကျိန်ဆိုခြင်းကို မကြခဏပြုလေ့ရှိသည်။ ကျိန်ဆိုရာ၌ တစ်ချို့ပြည့်စုံသလို တစ်ချို့ပြည့်စုံခြင်းမရှိဟုဆိုနိုင်သည် (မ ၂၃း၁၆-၂၂)။ ဘုရားသခင်နှင့် ကျိန်ဆိုခြင်းသည် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ မှန်နေသည်။ ယေရှုကမူ မည်သို့သော ကျိန်ဆိုခြင်းမျိုးမဆို ကောင်းသောအရာမဟုတ်၍ အသုံးမပြုစေလိုပါ။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်နှင့် ကျိန်ဆိုသောအခါ ဘုရားသခင်သည် လူ့အဆင့်အရေးအရာ၌ ပါဝင်စေရာရောက်ပြီး အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင် အရာ၌ မထား၊ လူနှင့်အဆင့်တူသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
This entry was posted on November 19, 2010 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged Rev. Dr. Simon Pau Khan En.